कतै तपाँइको ब्यायफ्रेण्डमाथि तपाँइकै साथीले आँखा लगाएकी त छैनन ? यसरी पत्ता लगाउनुस ! – Gandaki Media
जब तपाँइ कोही केटासँग प्रेममा पर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यसबारेमा आफ्नो नजिकको केटी साथीलाई नै भन्नुहुन्छ । त्यसपछि आफ्नो प्रेमीलाई साथीसँग चिनजान पनि गराउनुहुन्छ । किनकी साथीको सहयोगमा धेरै स्थानमा तपाँइलाई सुरक्षित गराउँछ र तपाइले आवश्यक अनुसार सहयोग पनि पाउनुहुन्छ ।
तर के थाहा तपाँइकै साथीले तपाँइकै प्रेमीलाई आँखा लगाएको पनि त हुन सक्छ ? किनकी यस्ता उदाहरण निकै पाइन्छन । अब तपाँइको प्रेमीलाई तपाँइकै साथीले आँखा लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरा कसरि पत्ता लगाउने त ? तपाँइले आफनो प्रेमीलाई साथी सँग भेटाएपछि यदि यस्ता परिवर्तन साथीमा पाउनुभयो भने सम्झनुस उनको नियत ठिक छैन । के कस्ता परिवर्तन देखिन सक्छन त तपाँइको साथीमा ? जान्नुहोस ।
१. अचानका तपाँइको साथीको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ । पहिला तपाँइसँग हर समय रमाउने र साथ दिने साथी एकाएक तपाँइका कुरा काट्ने, तपाँइसँग सानो सानो कुरामा असहमती जनाउने गर्न थाल्छिन भने,
२. तपाँइ जब साथीसँग आफ्नो प्रेमीको बारेमा कुरा गर्नुथाल्नुहुन्छ, उसको प्रशंसा गर्नथाल्नुहुन्छ ? उनी झर्किन थाल्छिन वा तपाइका कुरामा वास्ता गर्दिनन । उनी मात्र अँ.. अँ ..को जवाफ दिन्छिन् भने,
३.यदि तपाँइहरु तीनैजना सँगै गफ गर्दैहुनुहुन्छ भने साथीको आँखामा ख्याल राख्नुहोस । यदि साथीले तपाँइको प्रेमीलाई लगातार आँखामा हेरिरहेकी छन् र तपाँइको खासै वास्ता राखेकी छैनन भने,
४.तपाँइ र साथी मात्रै हुँदा सानो सानो कुरामा पनि तपाँयको प्रेमीलाई सम्झिरहन्छिन, उसकै कुरा गर्छिन र उसलाई भेट्नका लागि नियमित कर गर्न थाल्छिन भने,
५.सानो समस्यामा पनि तपाँइको प्रेमीको सल्लाह लिन चाहन्छिन र सोही अनुसार गर्छिन भने
६.सपिङ या रेष्टुराँ जादाँ तपाँइको प्रेमीको रोजाइ मात्रै चाहन्छिन भने,
७ पहिला खासै मेकअप र ड्रेसअपमा ध्यान नदिने साथी तपाँइको प्रेमीलाई भेट्न जाँदा मेकअप र ड्रेसअपमा बढी ध्यान दिन्छिन भने,
८. तपाँइहरु तीनजना भेट्दा साथी प्रेमीको नजिकै जोडिएर बस्न चाहन्छिन र प्रेमीको सानो सानो मजाकमा पनि बढी हाँस्न थाल्छिन भने,
९.तपाँइको प्रेमीसँग कुरा गर्दा यदि साथीले सेक्सी हाउभाउ सहित ओठ टोकेर कुरा गर्छिन भने,